China Gaming Mat Display Counters Kugadzira uye Fekitori |Yuteng
Gaming Mat Display Counters
Kana mafaera ako emifananidzo asingasangane nezvatinotaura, PakFactory haina mhosva kune chero zvikanganiso zvekudhinda zvinogona kumuka semhedzisiro.Verenga yeduArtwork Preparation Guidepamusoro pekugadzirisa mafaera ako kuti aendeswe kanaTaura nesukuti uwane rubatsiro rwekurongedza!
Cheka Mutsetse (Mitsetse Yakasviba):
Inoratidza kuchekwa pakukura kwayo kwekupedzisira.Yakakosha mifananidzo uye zvinyorwa zvinofanirwa kuiswa inokwana 0.125 inches mukati memutsetse wakachekwa.
Crease Line (Mitsetse Dzvuku):
Inoratidza panofanira kupetwa chigadzirwa.
Inoratidza panowanikwa mutsara wekubuda ropa.Chero dhizaini rinoenda kumutsara wakachekwa rinofanirwa kukwiridzirwa kumutsara wekubuda ropa kuti uwane kudhindwa kusina musono.
Chengetedzo Margin(Mitsetse YeGreen Line):
Inoratidza panofanira kuiswa madhiri nemavara zvakachengetedzeka mukati.Seyakajairwa indasitiri, ese maartwork anofanirwa kuiswa 0.125 inches kure nemutsetse wakachekwa kunze kwekunge dhizaini yako iri nemaune.
Perforation (Mitsetse ine Dotted Black):
Perforation line (perforation line) zvinoreva bepa rinoboorwa nemaburi madiki kuti bepa ridambuke nekupetwa zviri nyore.
Yedu mana tier makadhibhokisi anoratidza kumira kwekaunda kana tafura yekushandiswa kwepamusoro ndeye yakajairika kumira yakanakira kuratidza rakasiyana zvigadzirwa.Iine chigadziko chakachinjika kumatira uye chivakwa chakasimba chigadziko chinogona kugarisa zvigadzirwa zvinosvika 2 ″ (50mm) gobvu uye kusvika 18 ″ (457mm) yakafara.
Kazhinji inoshandiswa kuratidza zvinotevera zvigadzirwa:
Izvo chete zvinogumira zvinhu zvirefu, zvitete uye zvinorema, senge mafoto-mafuremu akareba kupfuura 8 ″ (200mm) - kuve anorema zvakanyanya izvi zvingave nekatsika kekurovera chigadziko neshure kunze kwekunge chakatarisana nemadziro.
Imwe neimwe tier ine 457mm (18 ″) yakafara, uye 50mm (2 ″) yakadzika.
Kusimuka pakati pematairi i46mm (1.8 ″), ichiratidza 46mm yepamusoro pezvigadzirwa zvakaiswa mumatatu epamusoro.
Yekutanga tier ine muromo wepamberi we52mm (2 ″), ichivanza 52mm yepasi pechigadzirwa, nepo mamwe matairi aine muromo we38mm (1.5 ″).
Saizi yese yestand ndeye:
Kufara: 18.3" (466mm)
Kureba: 10.7 ″ (271mm) isina musoro bhodhi
Kureba: 17.7 ″ (450mm) ine musoro bhodhi
Kudzika: 9" (230mm)
Isu tinobata stock mune matatu mavara White, Black uye Brown.
Isu tinowanzo kubvunzwa nezve branding - izvi zvinogoneka asi mutengo uye nzira inosiyana zvakanyanya zvichienderana nehuwandu hunodiwa.Bata isu nehuwandu uye zvinodiwa uye isu tichataura, kana kutipa runhare kana uchida zano.
Kudhinda header board kunoshanda kubva kumativi gumi.
Mamiriro akadhindwa akazara anogona kushanda kubva kumativi mazana mashanu.
Kunze kwekunge tichitenga nhamba yakakura yezvimire izvi tinokurudzira kuzvitora zvakafanounganidzwa, asi isu tinogona kupa:
Assembled :Mastand anounzwa akagadzirira kuenda (chaizvo uchazoda kupinza musoro bhodhi kumusoro).
Flat yakazara:Iyi flat yakazara nemirayiridzo yegungano.Sezvimwe zvinhu zvese zvakapetwa zvakapfava vamwe vanhu vanozviwana zviri nyore kuunganidza vamwe zvisiri nyore.Isu tinokurudzira kuti utarise vhidhiyo yegungano pazasi usati watenga uye zvakare usati watanga kuungana.Muchiitiko chedu vanhu vanoita izvi kazhinji havana nyaya.Kana iwe usinganzwe wakasununguka kana kungongoda akati wandei anomira wadii kuodha pre-yakaungana uye isu tiite basa racho.
Flat Packed & Individual Boxed :Aya achiri akaturikidzana asi imwe neimwe mubhokisi rayo, izvi zvinowanzoitika kune vatengesi vezvitoro vari kuenderera mberi nekutumira kune vatengi vavo.
Kana mastand aunganidzwa akagadzirirwa kuti arambe akadaro - kune akati wandei ekuvhara ma tabo mukuita uye kuedza kudzoreredza kurongedza chigadziko kune chokwadi chekudzikisa hupenyu hwayo.
Zvakapfuura: Sweet Candy Perfume Lab
Zvinotevera: Art Material Sets
New Game Controller Cell Phone Accessory Display Rack
Scratch Mufananidzo Crafts
Zhizha Lipgloss yeVakadzi kadhibhodhi yekurongedza bhokisi
mafuta akakosha seti yekurongedza chipo bhokisi
Mitsva yekugadzira isina mvura yekugadzira lipstick seti
Empty Lipstick Paper Bhokisi Case Gift
Art Material Sets
Customized Brown Kraft Pepa Mabhegi, Mabhokisi ehembe, Lid Uye Pazasi Bhokisi, Yakagadzirirwa Kraft Pepa Bag Ruva, Kraft Paper Bag, Kraft Paper Bags,